प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाडफाट कुन तह र स्थानीयलाई कति कति ? « Kalakhabar
प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाडफाट कुन तह र स्थानीयलाई कति कति ?
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, १६ जेष्ठ २०७७ १५:५३
कलाखबर संवाददाता,१६,जेठ–काठमाण्डौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको )सूत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न ४ शीर्षकका रकमको अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँड गरेको हो । सो अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पर्छन् ।
संघीय सिञ्चित कोषबाट गएको उक्त रकममध्ये प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशतर्फको अनुदानमध्ये ७ वटा प्रदेशलाई नेपाल सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको होे ।
त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रहेको छ ।